Waa Maxay MarTech? Teknolojiyadda Suuqgeynta: Waagii hore, Hadda, iyo Mustaqbalka | Martech Zone
Waad iga heli kartaa wareer aniga oo qoraya maqaal ku saabsan MarTech ka dib markii aan daabacay in ka badan 6,000 oo maqaal ah oo ku saabsan tikniyoolajiyadda suuq-geynta muddo ka badan 16 sano (wixii ka dambeeya da'da balooggan… Waxaan ku jiray blogger hore). Waxaan aaminsanahay inay mudan tahay in la daabaco oo laga caawiyo xirfadleyda ganacsiga inay si wanaagsan u ogaadaan waxa MarTech ahaa, yahay, iyo mustaqbalka waxa uu noqon doono.
Marka hore, dabcan, taasi waa taas MarTech waa dekedda ee suuq geynta iyo tikniyoolajiyadda. Waxaan seegay fursad weyn oo aan ula imaaday erayga… aan isticmaalayay Suuqgeynta muddo sanado ah ka hor intaanan dib u magacaabin boggeyga kadib MarTech waxaa la qaatay dhammaan warshadaha.
Ma hubo cidda saxda ah ee qalinka ku duugtay ereyga, laakiin waxaan ixtiraam weyn u hayaa Scott Brinker oo gabi ahaanba fure u ahaa qaadashada ereyga guud. Scott wuu iga caqli badnaa intii aan ahaa… wuxuu ka tagay hal xaraf aniguna waxaan ka tagay farabadan.
Martech wuxuu khuseeyaa dadaallada waaweyn, dadaalka, iyo aaladaha ka faa'iideysanaya tikniyoolajiyadda si loo gaaro himilooyinka iyo ujeeddooyinka suuqgeynta.
Waa kan video aad u wanaagsan asxaabteyda oo ah Qaybta Saddexaad kaas oo bixiya sharaxaad kooban oo fudud oo fiidiyoow ah oo ah Waa maxay Martech:
Si aan u bixiyo aragti guud, waxaan rabaa inaan ku daro aragtidayda:
Taariikhda MarTech: MarTech Hore
Xaaladda MarTech: MarTech Joogo
Waa maxay MarTech Stack?
Sidee MarTech u gaaraa wixii dhaafsiisan howlaha xogta Suuq geynta?
Sidee MarTech u Saameysay Suuqleyda iyo xirfadahooda lagama maarmaanka ah?
Sidee ayuu MarTech u horumariyay suuqgeynta?
Mustaqbalka MarTech: Mustaqbalka MarTech
Waxaan badanaa ka fikirnaa MarTech maanta sida xalka ku saleysan internetka. Waxaan ku doodi lahaa in tikniyoolajiyadda suuqgeynta lafteeda ay ka horreysay eraybixinta maanta. Horraantii 2000, waxaan caawinayay ganacsiyada sida New York Times iyo Toronto Globe iyo Mail inay dhisaan bakhaarro cabbirkoodu dhan yahay terabyte iyadoo la adeegsanayo tiro soo saaris ah, isbeddel, iyo rar (ETL) qalab. Waxaan isku darnay xogta macaamil ganacsi, xogta dadka, xogta juqraafi, iyo ilo kale oo dhowr ah waxaana ka faa'iideysanay nidaamyadan si aan u weydiino, u diro, ula socono, una cabirno xayeysiinta daabacaadda, raadinta taleefannada, iyo ololeyaasha boostada tooska ah.
Daabacaad ahaan, waxaan ka shaqeeyey Wargeysyada waxyar kadib markay ka guureen cadaadiska leedhka la shubay ee loo wareejiyey taarikada kiimikada firfircoon ee leh aragti ku gubatay iyaga oo isticmaalaya laambadihii ugu horreeyay ee xoogga badnaa iyo diidmada, ka dibna kumbuyuutar kumbuyuutar iyo muraayadaha. Runtii waan kaqeyb galay iskuuladaas (Mountain View) dayactirna qalabkaas. Nidaamkii ka yimid naqshadeynta ilaa daabacaadu wuxuu ahaa mid gebi ahaanba dijitaal ah… waxaanan ka mid ahayn shirkadihii ugu horreeyay ee u dhaqaajiya fiber-ka si ay ugu dhaqaaqaan faylalka bogga ballaaran (oo wali laba jeer ka sarreeya xallinta kormeerayaasha heer sare ee maanta). Wax soo saarkeenii wali waxaa loo geeyay shaashadaha then ka dibna waxaa loo gudbiyay makiinadaha wax daabaca.
Qalabkani wuxuu ahaa mid layaableh oo casri ah teknolojiyaddeenuna waxay ku taal cirifka dhiig baxa. Qalabkani ma aheyn mid daruur ku saleysan ama SaaS waqtigaas… laakiin dhab ahaantii waxaan ka shaqeeyay qaar ka mid ah noocyadii ugu horreeyay ee webka ku saleysan ee nidaamyadaas sidoo kale, iyadoo lagu darayo xogta GIS si loo daboolo xogta guriga iyo in la dhiso ololeyaal. Waxaan uga wareegnay wareejinta xogta satelite-ka shabakadaha jireed, uguna wareejinay fiilada intranet, internetka. Toban sano ka dib, iyo dhammaan nidaamyadaas iyo teknoolojiyadaas oo aan ka shaqeeyay hadda waa daruur ku saleysan oo la jaan qaadi karta websaydhka, emaylka, xayeysiinta, iyo tikniyoolajiyadda suuqgeynta moobiilka si ay ula xiriiraan dadyowga.
Wixii nooga maqnaa markaa si aan ugu guurno daruuraha xalalkaas waxay ahaayeen keyd la awoodi karo, baaxad weyn, xusuusta, iyo awood xisaabinta. Iyada oo kharashka server-yada hoos u sii dhacayaan iyo xawaaraha ballaadhku cirka isku shareerayo, Software sida Service a (SaaS) wuu dhashay… waligeen gadaal gadaal uma eegin! Dabcan, macaamiisha si buuxda uma aqbalin webka, emaylka, iyo moobilka waagaas… marka waxsoosaarkayaga waxaa lagu soo diray warbaahinta, iyo daabacaadda, iyo boostada tooska ah. Xitaa waa la kala soocay oo la shaqsiyeeyay.
Waxaan mar fadhiistay wareysi fuliyaha halkaas oo uu ku yidhi, “Waxaan asal ahaan soo hindiseen suuq-geynta dijital ah and” aadna waan ugu qoslay. Istaraatijiyadaha aan maanta geynay way cabireen oo way ka fududahay sidii aan ahaa da 'yarta teknoolojiyadda, laakiin aan cadaynno in hababka, qaababka, iyo dhaqamada ee geynta suuq geyn casri ah ay dhaceen sanado ka hor intaan shirkad kasta marin u helin internetka. Qaarkeen (haa, aniga…) waan joognay markii aan ka shaqeyneynay ololayaasha mareegta… ama aan ka fureyno daaqad adeegeena goobta shaqada. Adiga dhalinyarada ah… taasi asal ahaan waxay ahayd a daruur ka dhex soconaya shirkadaada halka bartaada terminal / workstation ay aheyd biraawsar oo dhamaan keydinta iyo awooda xisaabinta ay kujiraan serverka.
Shirkaduhu way kala firidhsan yihiin maamulka xiriirka macaamiisha, advertising, maaraynta dhacdada, suuq-geynta, maaraynta khibrada isticmaale, marketing warbaahinta bulshada, maaraynta sumcadda, email marketing, marketing mobile (shabakada, barnaamijyada, iyo SMS), otomaatiga suuq geynta, maareynta xogta suuq geynta, xog weyn, Analytics, ecommerce, xiriirka dadweynaha, awood iibinta, Iyo suuq raadinta. Khibrado cusub iyo tignoolajiyada soo ifbaxda sida xaqiiqda la kordhiyay, xaqiiqda dalwaddii, xaqiiqda isku dhafan, caqliga macmalka ah, ka shaqeynta luuqada dabiiciga ah, iyo inbadan oo ka mid ah ayaa raadinaya jidadkoodii hore iyo kuwa cusub.
Ma aqaano sida Scott ula socdo, laakiin wuxuu la socday koritaanka degdegga ah ee warshaddan in ka badan toban sano… iyo maanta Muuqaalka MarTech waxaa ku jira in ka badan 8,000 shirkadood.
In kasta oo Scott qaybo u qaybinayo qaab dhismeedka ku saleysan mas'uuliyadda suuqgeynta, khadadka ayaa xoogaa yara yaraada marka loo eego dhufto ee iyo waxa ay awoodaha asaasiga ahi yihiin. Suuqyayaashu waxay urursadaan oo ay dhexgalaan barnaamijyadan sida loogu baahan yahay si loo dhiso, loo fuliyo, loona cabbiro ololeyaasha suuqgeynta ee ku saabsan soo iibsashada, kor u qaadista, iyo sii haysashada macaamiisha. Ururinta aagagga iyo isku dhafkooda waxaa loo yaqaan Xidhmada MarTech.
Maxay Tahay MarTech?
A Xidhmada MarTech waa ururinta nidaamyada iyo aaladaha ay suuqleydu u adeegsadaan baaritaanka, istiraatiijiyadda, fulinta, hagaajinta iyo cabbiraadda geeddi-socodka suuqgeynta inta lagu jiro safarka iibsashada rajada iyo iyada oo loo marayo nolosha macaamiisha.
Marxaladda 'Martech Stack' waxay inta badan ku dartaa barnaamijyada SaaS ee shatiyeysan iyo is-dhexgalka macaamiisha ku saleysan daruur si ay u otomatig u yeeshaan xogta lagama maarmaanka u ah inay bixiso wax kasta oo lagama maarmaan u ah taageerada dadaalka suuqgeynta shirkadda. Maanta, shirkadaha ugu badan ee loo yaqaan 'MarTech Stacks' waxay ka tagaan waxyaabo badan oo la doonayo, shirkaduhu waxay waqti badan ku qaataan horumarinta isdhexgalka iyo shaqaalaha inay wali dhisaan oo ay diraan ololahooda suuqgeynta.
MarTech Waxay Sii Dheereysay Suuqgeynta
Waxaan sidoo kale aqoonsan nahay in isdhexgal kasta oo lala yeesho rajo ama macaamil uu saameyn ku yeelanayo dadaalkeena suuq-geynta. Hadday tahay macaamil ka cabanaya warbaahinta bulshada, hakad adeeg ah, ama dhibaato raadinta macluumaad world adduunyada baraha bulshada, waayo-aragnimada macmiilku hadda waa sababo la xiriira saamaynta dadaalladeenna suuq-geynta iyo sumcadda guud. Sababtaas awgeed, MarTech way sii ballaaraneysaa wixii ka dambeeya dadaalka suuq-geynta oo hadda waxay ku darsameysaa adeegyada macaamiisha, iibka, xisaabinta, iyo xogta adeegsiga si loo magacaabo wax yar.
Shirkadaha ganacsiga sida Salesforce, Adobe, Oracle, SAP, iyo Microsoft oo dhista qaybo yaryar iyo qaybo ka mid ah meelaha loo yaqaan 'MarTech' waxay shirkado ku helayaan xawaare deg deg ah, iyaga oo isku daraya, iskuna dayaya inay dhisaan barnaamijyo u adeegi kara macaamiishooda bilow ilaa dhammaad. Waa wax qasan, in kastoo. Isku-darka daruuro badan oo ku yaal Salesforce, tusaale ahaan, waxay u baahan tahay la-hawlgalayaasha Salesforce khibrad leh taasi waxay u qabatay daraasiin shirkado ah. Soo guuridda, hirgelinta, iyo isku-darka nidaamyadaas waxay qaadan kartaa bilo… ama xitaa sannado. Ujeedada bixiyaha SaaS waa inuu sii wado kobcinta xiriirka ay la leeyihiin macmiilkooda iyo inuu siiyo xalal wanaagsan.
Sidee Ayuu U Saameeyay Suuqleyda?
Si looga faa'iideysto MarTech, suuqleyda maanta badiyaa waa isku-xirnaanta hal-abuurnimo, falanqeyn, iyo farsamooyin farsamo si looga gudbo xaddidaadaha iyo caqabadaha inta badan tikniyoolajiyadda suuqgeynta u baahan. Tusaale ahaan, suuqgeynta emaylku waa inay ka walaacdaa kaabayaasha aasaasiga ah ee xaqiijinta soo-gudbinta, nadiifinta xogta liisaska emaylka, hibada hal-abuurka ah ee dhisidda qaybo isgaarsiineed oo la yaab leh, nuqul-sameynta nuqul sameynta nuxur ahaan u horseedaya macaamiil ficil ahaan, karti-baaris loogu talagalay tarjumaadda riixitaanka iyo beddelka xogta, iyo… codeynta oo bixisa khibrad isdaba-joog ah oo ku saabsan macaamiisha iimaylka badan iyo noocyada qalabka. Yikes… taasi waa hibada loo baahan yahay… taasna waa uun e-mayl.
Suuqgeyaashu maanta waa inay noqdaan kuwo si caqli-gal ah u caqli-gal ah, hal-abuur leh, oo ku qanacsan isbedelka, oo fahmaya sida saxda ah ee loo turjumo xogta. Waa inay si layaab leh ugu fiirsadaan jawaab celinta macaamiisha, arrimaha khuseeya adeegga macaamiisha, tartamayaashooda, iyo talooyinka kooxda iibkooda. Midkoodna oo ka mid ah tiirarkan, waxay u badan tahay inay ku shaqeynayaan qasaaro. Ama, waa inay ku tiirsanaadaan ilaha dibadda ee ka caawin kara iyaga. Taasi waxay ii ahayd ganacsi faa'iido ii leh tobankii sano ee la soo dhaafay!
Sidee ayey saameyn ugu yeelatay Suuqgeynta?
MarTech maanta waxaa loo geeyay si loo ururiyo xogta, loo kobciyo dhagaystayaasha bartilmaameedka ah, lala xiriiro macaamiisha, la qorsheeyo loona qaybiyo waxyaabaha, loo aqoonsado oo loo kala hormariyo waxyaabaha ugu muhiimsan, lana kormeero sumcadda sumcadda, iyo la socoshada dakhliga iyo kaqeybgalka ololeyaasha dhammaan warbaahin kasta iyo kanaal… oo ay ku jiraan kanaallada suuqgeynta caadiga ah. In kasta oo qaar ka mid ah kanaaladaha daabacaadda dhaqameed ay ku dari karaan lambar QR ama xiriirin la socon kara, qaar ka mid ah kanaalada dhaqameed sida boorarka ayaa si buuxda u dijitaal ah oo isku dhafan.
Waxaan jeclaan lahaa inaan sheego in suuqgeynta maanta ay aad uga casrisan tahay dhowr iyo toban sano ka hor… bixinta farriin waqtigeeda ku habboon oo ay soo dhoweeyaan macaamiisha iyo ganacsataduba. Been baan sheegayaa. Suuqgeynta maanta ayaa inteeda badan ka madhnayn wax u damqasho ah macaamiisha iyo ganacsiyada ay hafiyeen fariimaha. Markaan halkan fadhiyo, waxaan hayaa 4,000 oo emayl oo aan la aqrin ah waxaanna ka reebay liiska daraasiin liisas ah oo layga doorto ogolaansha la aan maalin kasta.
In kasta oo barashada mashiinka iyo sirdoonka macmalka ah ay naga caawinayaan in aan si wanaagsan u qaybsanno oo aan shakhsi u yeelno farriimahayaga, shirkaduhu waxay dejinayaan xalalkan, iyagoo uruurinaya boqolaal qodob oo xog ah oo macaamiisha xitaa aysan ka warqabin, iyo - halkii ay si fiican u hagaajin lahaayeen farriimahooda - waxay ku duqeynayaan iyaga fariimo badan.
Waxay umuuqataa suuq geynta dijitaalka ah mid raqiis ah, inta suuqleyda ah ee SPAM wax u dhimayaan dhagaystayaashooda bartilmaameedka ah ama xayeysiinta malaasyada ee kanaal kasta oo ay ka heli karaan inay ku dhuftaan rajadooda meelkasta oo ay indhahoodu wareegaan.
Taxaddar la'aanta MarTech waxay la qabsaneysaa ganacsiyada, in kastoo. Macaamiisha ayaa dalbanaya inbadan oo qarsoodi ah, curyaaminta ogeysiisyada, u soo gudbinta SPAM si xoog leh, geynta cinwaannada emaylka ku meel gaarka ah iyo kuwa sare. Waxaan aragnaa daalacayaashu inay bilaabaan inay xayiraan cookies, aaladaha mobilada ee xannibaya raadraaca, iyo aaladaha ay furayaan rukhsadda xogtooda si macaamiisha ay si fiican u xakameyn karaan xogta la qabtay oo loo adeegsaday iyaga.
Si la yaab leh, waxaan daawanayaa qaar ka mid ah kanaalada suuqgeynta suuqgeynta ee soo laabashada ah. Saaxiibkeyga aniga oo wada barnaamij casri ah oo CRM iyo suuqgeyn ayaa u muuqda koritaan badan iyo heerar jawaab celin wanaagsan oo leh barnaamijyo si toos ah loo daabaco. In kasta oo sanduuqaaga jidhku qaali yahay in la galo, ma jiraan 4,000 qaybood oo SPAM ah oo ku jira!
Cusbooneysiinta tikniyoolajiyada suuq-geynta dijitaalka ah ayaa cirka isku sii shareeraysa iyada oo qaab-dhismeedka iyo teknolojiyada ay sahlayaan in la dhiso, la isku daro, lana maareeyo meheradaha. Markii aan la kulmay inaan kumanaan kun oo doolar bishii ku bixiyo bixiyaha emaylka si aan u faafiyo, waxaan haystay aqoon iyo khibrad igu filan oo aniga iyo saaxiibkay uun dhisnay mashiinka emaylka ee noo gaarka ah. Waxay ku kacdaa xoogaa lacag ah bishii. Waxaan aaminsanahay inay tani tahay wajiga xiga ee MarTech.
Nidaamyada aan sharciga lahayn iyo kuwa aan lahayn ayaa kor u kacaya hadda, taas oo u oggolaanaysa kuwa aan horumarintu dhab ahaantii dhisi karin oo ay miisaami karaan xallintooda iyaga oo aan qorin hal koodh oo lambar ah. Isla mar ahaantaana, barnaamijyada suuqgeynta cusub ayaa maalin walba soo kordha oo leh astaamo iyo karti ka sarreysa dhufto ee ku kacaya tobanaan kun oo doolar in ka badan in la hirgeliyo. Waxaa i qarxiyay nidaamyada kobcinta ecommerce sida Klaviyo, Moosend, Iyo Omnisend, tusaale ahaan. Waxaan awooday inaan dhexgalo oo aan dhiso safaro isku dhafan oo u horseeday koritaanka laba lambar lambar macaamiishayda maalin gudaheed. Haddaan la shaqeyn lahaa nidaam shirkadeed, taasi waxay qaadan lahayd bilo.
Raadinta macaamiisha waxay noqoneysaa mid dhib badan, laakiin xalalka khibrada macaamiisha sida Jebbit waxay siinayaan waayo-aragnimo qurux badan, is-adeegsi ah iibsadayaasha si ay u maraan waddadooda oo ay naftooda ugu kaxeeyaan beddelaad-dhammaantood leh buskudka koowaad ee kooxda oo la keydin karo lana socon karo. Dagaalka ku saabsan cookies-ka saddexaad waa inuu ku dhejiyaa pixel-ka Facebook (taasi waa waxa aan aaminsanahay in sababta dhabta ah ay tahay sababta Google u tuurayo) sidaa darteed Facebook ma awoodi doono inuu la socdo qof walba oo ka tirsan Facebook. Taasi waxay yareyn kartaa bartilmaameedka casriga ah ee Facebook… waxayna kordhin kartaa saamiga suuqa ee Google.
Sirdoonka macmalka ah iyo aaladaha gorfaynta sare waxay ka caawinayaan inay bixiyaan aragti dheeri ah oo ku saabsan dadaalka suuq geynta omni-channel iyo saameynta ay ku leeyihiin guud ahaan safarka wax iibsiga. Taasi waa war wanaagsan oo shirkadaha wali madaxa u xoqaya halka ay ku bixinayaan dadaalka ugu badan si ay u helaan macaamiil cusub.
Anigu ma ihi mustaqbal doon, laakiin waxaan ku kalsoonahay in caqligeenu nidaamyadeenu helaan iyo otomaatig badan oo aan ku dabaqi karno howlaheena lagu celcelin karo, in xirfadleyda suuqgeynta ay waqti ku qaadan karaan halka ay aadka ugu qiimeeyaan - horumarinta khibradaha hal abuurka iyo hal abuurka leh. kaas oo dhaqaajiya kaqeybgalka isla markaana siiya qiimo rajada iyo macaamiisha. Waxaan rajeynayaa inay i siiso awoodaha soo socda:
Qaadashada - Awoodda aan ku fahmi karo sida suuq-geyn kasta iyo maalgashi iib ah oo aan samaynayo ay u saamaynayso sii-haynta macaamiisha, qiimaha macaamiisha, iyo helitaanka.
Real Time-Data - Awoodda in aan u kuurgalo dhaqdhaqaaqa waqtiga dhabta ah halkii aan ka sugi lahaa saacado ama maalmo si aan u soo ururiyo warbixinnada ku habboon si aan u arko una wanaajiyo dadaallada suuqgeynteyda.
360-Degree Muuqaal - Awoodda in la arko isdhexgal kasta oo lala yeesho rajo ama macaamil si fiican ugu adeegta, loola xiriiro, loo fahmo, loona siiyo qiimo iyaga.
Omni-Channel - Awoodda aan kula hadli karo macaamilka khadka tooska ah ama kanaalka ay rabaan in lagula socodsiiyo nidaamka aan si fudud uga dhex shaqeyn karo.
Sirdoonka - Awoodda in aan uga gudbo eexdayda gaarka ah ee suuqleyda oo aan yeesho nidaam kala qaybiya, shaqsiyeeya, oo fuliya farriinta saxda ah waqtiga saxda ah ee ku habboon macmiilkayga.
Waxaan jeclaan lahaa inaan maqlo fikradahaaga iyo jawaab celintaada ku saabsan Martech: Soo dhaafay, Hadda, iyo Mustaqbal. Miyaan ka musbaaray mise waan ka baxay? Waxay kuxirantahay baaxadda meheraddaada, aqoonta sare, iyo ilaha laga heli karo, waxaan hubaa in aragtidaadu ay ka duwanaan karto tayda. Waxaan ka shaqeyn doonaa qodobkan bil kasta ama si aan ula socdo taariikhda… Waxaan rajeynayaa inay ka caawineyso sharaxaadda warshaddan cajiibka ah!
Hadaad jeceshahay inaad lasocoto Martech, fadlan iska qor joornaalkayga iyo qoraalkayga! Waxaad ka heli doontaa foom iyo xiriiriyeyaal labada lugood.
Tags: advertisingAnalyticsxog weynContent Suuqmaamulka xiriirka macaamiishaecommerceEmail Marketingmaaraynta dhacdadasuuq-geynta suuqamaaraynta xogta suuq geyntatikniyoolajiyadda suuqgeyntahalgankataariikhda martechisdhexgalka martechxidhmooyinmarketing mobilexiriirka dadweynahamaaraynta sumcadKordhinta IibkaScott brinkerSEOSMSMedia Social Suuqmaaraynta khibrada isticmaalahamuxuu yahay shahiid